Ikhaya » Izindaba Zamuva » Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! » Imboni Yekhithi Yesidlo Ikhuphuka Ngezigidigidi
Ngo-2020, abathengi abaningi kunangaphambili babethatha isinqumo soku-oda amakhithi okudla nokunye ukudla neziphuzo ku-inthanethi ukugwema ukuthenga igrosa ezitolo eziminyene, lapho bengase bachayeke khona igciwane le-COVID-19.
Ukukhula kuqhubekile ngo-2021 njengoba abathengi bebebheka izinsiza zokudla kanye ne-e-commerce yegrosa njengendlela ehlukile yokuthenga igrosa nokuhlelwa kokudla. NgoMsombuluko, u-Kroger umemezele ukuthi ikhithi yakhe yokudla kanye nebhizinisi lokudla eliphekiwe le-Home Chef selidlule i- $ 1 billion ekuthengisweni konyaka njengoba abathengi bebheke izixazululo zokudla ezilula phakathi nalolu bhubhane.
Ngokomhlaziyi wePackaged Facts uCara Rasch, lezi zindaba ezimayelana noMpheki Wasekhaya azimangazi. “Njengezinye izinkampani zamakhithi okudla, i-Home Chef ithole inzuzo eqinile yokuthengisa ngesikhathi sodlame njengoba abantu bechithe isikhathi esiningi besekhaya futhi bebheka okuhlukahlukene ngesikhathi sokudla. Njengomunye wabaholi bemakethe yekhithi yokudla, i-Home Chef isebenzise izitayela zabathengi zokupheka nokudla okwengeziwe ekhaya ukuze kufinyelele izinga lokukhula elingu-118% ngonyaka wezimali ka-2020. "
I-Packaged Facts' yangoJuni 2021 National Online Consumer Survey ithola ukuthi kulabo abasebenzisa izinsiza zokulethwa kwekhithi yokudla, izizathu eziphezulu zokwenza lokho ziwukuba lula, ukuthanda ukudla okuhlelelwe bona, nokuzama okuthile okusha/ukushintsha ukudla. Inani elikhulu labasebenzisi bekhithi yokudla baphinde babike ukuthi basebenzisa amakhithi okudla ngoba le mikhiqizo ibagcina isikhathi lapho belungiselela ukudla.
U-Rasch uyaphawula, “Izimpahla zokudla zimelela isiphakamiso senani kubathengi abagula ukuhlela ukudla noma ukuthenga igrosa abasafuna ukudla okuphekwe ekhaya, njengoba benciphisa isikhathi esichithwa befuna izindlela zokupheka nokuthenga izithako.”
URasch uyaqhubeka, “Ukukhathala kobhubhane ngo-2020 nango-2021 kuholele ekutheni abantu abaningi bafune izinketho ezintsha ukuze bathole ukudla etafuleni. Amakhithi okudla ayathandeka kulaba bathengi ngoba anciphisa isikhathi esichithwa ekuhleleni ukudla nasekuthengeni igilosa. Ziphinde zisuse ukungcola kokudla, njengoba konke ukudla kuqukethe izithako ezihlukaniswe kahle ezihloselwe iresiphi ethile.”
Ngaphezu kwalokho, uRasch uveza ukuthi izinto zokudla zisize abanye abathengi ukuthi bathuthukise amakhono abo okupheka ngesikhathi sodlame njengoba imikhuba yokudla ishintsha ekhaya. “Kulabo abangenawo amakhono amaningi okupheka, amakhithi okudla aye abasiza kakhulu ngokubafundisa ukupheka ngendlela elula, elandelanayo njengoba bethole isidingo noma isifiso sokupheka ekhaya.”
Noma kunjalo, izinsiza zokulethwa kwekhithi yokudla ziyi-niche. I-Packaged Facts' yangoJuni 2021 National Online Consumer Survey ithola ukuthi u-11% kuphela wabathengi ababika besebenzisa isevisi yokulethwa kwekhithi yokudla kulezi zinyanga eziyi-12 ezedlule.